WTM London Inoisa ZveMedia Media uye Artificial Intelligence Pasi Penzvimbo
Location: musha » Kutumira » Associations » WTM London Inoisa ZveMedia Media uye Artificial Intelligence Pasi Penzvimbo
Kuti nzvimbo dzekuenda dzinozvishambadza sei sezvo social media inokura mukukosha ichave yakakosha musoro pa WTM London 2017, chiitiko chinotungamira chepasi rose cheindasitiri yekufambisa.
Nyaya iyi ichauya pasi pekutariswa kwemazuva maviri echiitiko musi weMuvhuro 6 neChipiri 7 Mbudzi, apo hurukuro dzepanel uye mukurukuri mukuru acharatidza panguva yeSocial Media chirongwa kuWTM London, yakarongwa na. Travel Perspective.
Vashandi vekutengesa havazoda kupotsa chikamu chakakosha paWTM Global Stage, apo pani ichakurukura mubvunzo '.Is influencer marketing ndiyo nzira yekumberi kwekuenda?'Social media nyanzvi uye yekare Times munyori wenhau Steve Keenan ndiye achatungamirira hurukuro. Pakati peavo vari papanera pachava nenhamba dzakakosha kubva kunyanzvi dzekushambadzira dzesocial mediaWlar, Qubist uye Dash Hudson. Hurukuro yacho inoitika musi weChitatu Mbudzi 8 uye inotanga kubva 14.05 kusvika 15.00.
Izvi zvinozoteverwa nekukasika chimwe chikamu chinotarisa musoro kubva kune imwe kona. 'Nei nzvimbo dzekuenda dzichifanira kushandura maitiro avanozvitengesa ' achaongorora sei Airbnb uye Shanyira Sweden tashanda pamwe chete kusimudzira nyika. Pamusoro pezvo, Shanyira Jersey inotsanangura kuti vhidhiyo yemukati yava kushandiswa sei kuperekedza uye kuratidza pekugara uye mapakeji ekushanya.
Iyo pani icharatidzawo kuti Airbnb yakatanga sei maTps, ayo anokurudzira varidzi vepokugara kuti vatendeutsire vashanyi. Chikamu chinobvunza kana iyi modhi itsva yekudyidzana iri nzira yekumberi.
Hurukuro iyi ichafambiswa nemunyori, mutori wenhau uye muongorori wezvenhau Mark Frary uye ichasanganisira vatauri vanobva kuShanya kuSweden, Visit Jersey, Airbnb uye Cape Town Tourism.
Chikamu chakakosha zuva rakapfuura, neMuvhuro Mbudzi 6, ichaona a kubvunzurudza vakatarisana pamwe neTravelocity muvambi Terry jones. Jones achataura pamusoro pekuti Artificial Intelligence ichave yakakosha sei kune indasitiri uye mashandisiro eiyo kugadzira. Jones, uyo achabvunzurudzwa naMark Frary, akabatanidzwawo mukutanga kweKayak uye iye zvino ari sachigaro we Wayblazer, kambani iri kutoshandisa Artificial Intelligence kukanganisa misika yechinyakare yekufamba.
Kutarisana nechiso naTerry Jones kunoitika paWTM Global Stage, 14.00 kusvika 14.50.
WTM London, Musangano & Semina Maneja, Charlotte Alderslade, akati: "Nhepfenyuro yemagariro yakatokanganisa kufamba nenzira yakakura uye Artificial Intelligence ichave nekuwedzera kukuru mumakore anotevera, saka zvikamu izvi zvinofanirwa kune chero mutengesi."
Chirongwa ichi chinosanganisirawo misangano yekuti vezvenhau vangabatsira sei World Heritage saiti kubata kushanya zvine mwero uye kuti ungakurisa sei zita remunhu sevlogger; plus Facebook inouya ichiongororwa mubvunzurudzo yepamoyo.
Mazuva maviri aya anopera muMbairo weBest of Social Media 2017, nevashanu vanofaina, dare rekutonga uye vhoti yevateereri kuti vawane Awesome Winner 2017.
Africa yekushanya maitiro maererano neMastercard: Kwete nekukurumidza
Zvinotyisidzira zveCyber: CEO inounganidza ndege nendege
Meat Packaging Market In-Depth Analysis, Kukura...